Isiqinisekiso sempumelelo: Dibana neQela; Jonga iMeko zaBathengi kunye noMthengi woXwebhu
Semalt kunye neHlabathi
Izibakala zoMdla malunga neSemalt
Njengengelosi yokugada amashishini amakhulu namancinci ngokufanayo, iinkampani, oosomashishini, oosomashishini kunye neminye imizimba emininzi enobulungu kwi-Intanethi. I-Semalt yiarhente yedijithali ekuncedayo ukuba ufezekise oko ungenako ngokwakho ngesiqinisekiso sokwaneliseka xa impumelelo yeshishini lakho ichaphazelekayo.
I-Semalt ibonelela ngeenkonzo ezahlukeneyo ezivela kwi-SEO ngokukhethekileyo kwi-AutoSEO kunye ne-FullSEO ukuya kuhlaziyo lwewebhu, ukuphuculwa kweWebhu, kunye neMveliso yeVidiyo. I-Semalt ibonelela ngoncedo olufanelekileyo kwishishini lakho kwaye ikunika isiqinisekiso sokuphumelela kwe-100% ngaphandle koxinzelelo.
I-Semalt yiarhente yedijithali enobukho behlabathi lonke elisebenza kunye neqela eliqinisekisiweyo nelinakho ukusebenza kuzo zonke iindawo kunye namanqanaba okuyilwa kwewebhu, ukuphuhlisa iwebhu, ukuthengisa kunye nezinye izixhobo ezinxulumene namashishini akwi-Intanethi. Ngezixhobo ezifana ne-SEO-AutoSEO kunye ne-FullSEO, i-Web Analytics, njl njl. Baqinisekisa ukuba yonke into yamashishini kunye nabanini bamashishini bayakhathalelwa ngokufanelekileyo.
Ngaba ishishini lakho kwindawo eqinileyo okanye lihlupheka ngenxa yokugcwala kwabantu abakwiwebhusayithi? Ngaba unakho ukhuphiswano oluluqilima olukuthintela ekufikeleleni kumanqanaba aphezulu kuGoogle? Ke ungoyiki, iqhawe lakho uSemalt ulapha ukuzokusindisa kunye neshishini lakho!
I-Semalt yingcali ye-SEO kunye ne-arhente yokuthengisa ekubonelela ngeenkonzo eziqinisekisiweyo zokuphelisa ishishini lakho loyikisa kunye nelifanelekileyo kunye neengxaki zokuthengisa. Ikwenza oku ngokulandelelana kwayo okungapheliyo kweengcali eziqinisekisiweyo nezizinikeleyo ezibeka impumelelo kwishishini lakho ngaphezulu kwayo yonke enye into kwaye ithathe ishishini lakho kwinqanaba eliphezulu.
NgeSemalt, umi ukuba uza kuxhamla lukhulu kunye neengcali zayo ezinetalente ezikhoyo zokunceda unyaka wonke. Inkampani inenqanaba eliphezulu lokuthenjwa kwabathengi njengoko irekhodi ye-arhente yeeprojekthi ezigqityiweyo ivuthuza uphahla ngeeprojekthi ezingaphezu kwe-800,000 kunye nabasebenzisi abangama-300,000.
I-Semalt ibonelela ngeenkonzo ezingenakubalwa ezisemgangathweni ngamaxabiso afanelekileyo kunye namaxabiso afikelelekayo kwaye ungalibali izaphulelo zokumangalisa ngalo lonke ixesha lokuphumla ukubeka uncumo ebusweni bakho.
Oku kunye nezinye izibonelelo ezininzi omele uzifumane xa ukhetha uSemalt. Ezinye zezi nkonzo zibandakanya:
I-Semalt igxile ekunikezeni i-SEO yengcali kunye neenkonzo zokuthengisa ze-AutoSEO, i-FullSEO, Uhlalutyo lweWebhu, iMveliso yeVidiyo, kunye noPhuculo lweWebhu.
Yintoni i-SEO-uKhetho lweNjini yokuKhangela okanye i-SEO njengoko ibizwa njalo yindlela yokuthengisa iwebhusayithi ebandakanya inkqubo yokwandisa ubungakanani kunye nomgangatho wokugcwala kwabantu kuyo nayiphi na iwebhusayithi. Ikwenza oku ngokwandisa ukubonakala kwewebhusayithi kubasebenzisi ngenjini yokukhangela.
Yinkqubo yokufumana i-organic traffic kwiwebhusayithi ekugxilwe kuyo ngokusebenzisa amagama aphambili abhekiswe kwiwebhusayithi ukwandisa isikhundla sayo kwi-injini yokukhangela.
Ubuchule bobuchule be-SEO buka-Semalt buquka amasebe amabini eenkonzo ze-AutoSEO kunye ne-FullSEO:
I-AutoSEO-I-AutoSEO kaSemalt yeyamashishini afumana nje ukwazi imimangaliso ye-SEO kunye nefuthe lokuthengisa.
Nge-AutoSEO, amashishini asanda kungeniswa anokuphucula iiwebhusayithi zawo, aphucule ukubonakala kwewebhusayithi, atsala iindwendwe ezintsha kwaye anyusa ubukho be-Intanethi kwishishini.
I-FullSEO- Semalt ibonelela nge-FullSEO kubagqala ekusebenziseni ubuchule be-SEO. Kungenxa yamashishini athe avavanya i-SEO kwaye anqwenela ukuya phambili kwaye azuze ngakumbi njenge-ROI elungileyo kunye nenenzuzo, utyalomali lwexesha elizayo kwimarike, onwabele iziphumo zexesha elide kwaye andise indawo yawo ye-SEO.
Yintoni iWebhusayithi yohlalutyo: esi sisicwangciso sokuthengisa esibandakanya isethi yeenkqubo ezinzima zokuqokelela, ukunika ingxelo, nokuhlalutya idatha yewebhusayithi. Yintoni ke esetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo zokufikelela kwiwebhusayithi ukumisela inqanaba lempumelelo okanye ukusilela kweenjongo zewebhusayithi. Ikwasetyenziselwa ukufumanisa, kunye nokwenza izicwangciso zokuqinisekisa inqanaba lokuphucula.
Ukuhlaziywa kwewebhusayithi kwiSemalt kwahluke ngokupheleleyo kwiinkonzo eziqhelekileyo ozibonayo kwenye indawo. Ukuhlaziywa kwewebhusayithi ye-Semalt kunceda ishishini lakho ukuba liqonde yonke into malunga nemeko yemakethi yayo, kunye nokubek 'esweni okumakethi okubandakanya ukubeka iliso kwiwebhusayithi yakho, isikhundla somntu okhuphisana naye, njl.
Ikwanceda amashishini ukuba afumanise ukuthengisa kunye nokuthengisa okutsha kunye nokuthandwayo kwezeshishini. Ngapha koko, le nkonzo ibandakanya ukubanceda ukuba baguqule onke amaxwebhu ayimfuneko kunye nedatha emalunga neshishini kwiPDF ne-Excel.
Kwiinkonzo ezininzi, uya kulindeleka ukuba ukhule ngaphezulu nangaphezulu kwamaxabiso aphezulu anokukuxokisa ngexesha. Nangona kunjalo, iinkonzo zeSemalt zifikeleleka kubantu abaninzi okanye amashishini.
Zonke iinkonzo ze-Semalt ziza namaxabiso ahambelana nabaxhamli ngokuqinisekileyo afanele inkonzo kwaye ikwanceda ukugcina ipokotho yakho ingenayo. I-Semalt ikwabonelela ngezaphulelo ezininzi kwezinye zenkonzo yabo amaxesha ngamaxesha kumxumi wayo. Jonga imifanekiso engezantsi ukubona ezinye izaphulelo ezikhoyo.
Uluhlu lwamaxabiso eenkonzo zeSemalt
I-Semalt yahluke ngokupheleleyo kwi-arhente ezininzi zedijithali phaya. Yinkampani ezinikeleyo kwaye enobuzaza, I-Arhente yeDigital egcwele ngokupheleleyo enganikezeli nje kuphela kumgangatho ngamnye kodwa ikwanika nesiqinisekiso sokuphumelela kwendlela yakho.
Ukubonakalisa inqanaba lokuzinikela kunye nokunyaniseka kwayo, awufumani nje kuphela ukudibana neqela leSemalt kwiwebhusayithi, kodwa ufumana kwakhona ukubona iimeko zabathengi ezingqina inqanaba labo lempumelelo ngayo yonke indlela.
Dibana neQela leSemalt kwaye uyazi ukuba basebenza njani.
Ngokufikelela kwabo kwihlabathi liphela, uSemalt uqhayisa ngempumelelo enkulu kwiinkalo ezininzi ezinamatyala abaxumi abaphumeleleyo. Ezi zingqinisiso ziyafumaneka ukuze amanye amashishini adlule kuwo ngelixa elindele impumelelo kweshishini labo ukuba liboniswe kwiwebhusayithi yeSemalt.
Ezinye iimeko ezinkulu zabaxumi ezinamabali empumelelo amakhulu ziboniswe apha ngezantsi njengoko kubonwa kwiwebhusayithi.
I-Semalt ayinazo izithintelo ze-niche, kwaye ayinayo imida yolwimi. Iinkonzo zayo ziyafumaneka kubo bonke abanomdla kwihlabathi liphela. Zive ukhululekile ukujonga iwebhusayithi ye-semalt esemthethweni yamatyala abathengi aphumelele ngakumbi ku-Semalt.com
Ngaphandle kwamatyala abaxumi abonakalisa ukunyuka kwepesenti yezithuthi zabo banamava emva kongenelelo oluvela kwaSemalt. Kukho ubungqina obuninzi babathengi kunye nabathengi ababelana ngeenkcazo zabo ezothusayo malunga nemimangaliso ayenzileyo uSemalt kwishishini labo.
Ayikokuphela kokufumana ubungqina bevidiyo kubathengi kwiwebhusayithi yeSemalt, kodwa uya kubona ubungqina obubhaliweyo obunokubalwa okungagqibekanga okuvela kuGoogle nakuFacebook kubasebenzisi ababhalisile bakwaSemalt kwihlabathi liphela.
Ukusuka eUnited States ukuya eVietnam, ukuya eIreland, uSemalt akayazi mida. Eyona nto ixhalabisayo kukuzisa ulwaneliseko kubathengi abaninzi nokubeka amashishini abo phezulu kunye neenkonzo zabo zobungcali.
Kukho ubungqina obuninzi obunokuthi bungaphelelwa kule posti enye. Ukujonga ngakumbi nceda undwendwele iwebhusayithi ye-Semalt esemthethweni kwaye ufunde malunga nokuhlolwa kweenkonzo zeSemalt kumangqina okuqala.
Apha ngezantsi kukho ubungqina obubhaliweyo obuya kufumana kwiwebhusayithi yeSemalt:
Ixhala ngendawo yakho kwaye uzibuza ukuba ingaba uSemalt unokwazi ukuphatha ukujongana nelinye ilizwe, uloyiko olungoyikiyo malunga ne-Semalt ikugubungele, kungakhathaliseki indawo yakho.
Abasebenzi be-Semalt ziingcali kwaye bathetha iilwimi ezininzi. Banobuchule ekuthetheni iilwimi zehlabathi, ezinje, isiNgesi, isiFrentshi, isiPhuthukezi, iTurkey, isiTaliyane njalo njalo. Ke akufuneki ukhathazeke ngezithintelo zolwimi xa ucinga ngokuqesha iinkonzo zeSemalt kwishishini lakho okanye kwiwebhusayithi.
Ngaba uyazi ukuba isimboli sikaSemalt ngokwenene sisisithuthi?
Ngaba ubusazi ukuba iTurtle luphawu oluxabisekileyo eSemalt kungekuphela nje njengophawu lwenkampani kodwa nanjenge-arhente inesilwanyana sasekhaya ekuthiwa yiTurbo esihlala kuzo zonke iiofisi zakwaSemalt kwaye sisebenza njengoMhloli-ndlebe eTurbo?
Dibana noTurbo iFudu
Ngaphandle kweenkonzo eziphezulu ze-notch le arhente inikezela ngayo; amatyala abathengi angenakuphumelela aphathwe yiarhente kunye nobungqina obuninzi babathengi abavela kwihlabathi liphela ababelana ngamabali empumelelo kunye noSemalt, kusekho okuninzi kakhulu malunga neSemalt.
Semalt njenge-arhente ikholelwa kumandla okubloga kwaye ineblogi esebenzayo kakhulu yokusebenzisana nabaxumi bayo kunye nabasebenzisi.
Ibhlog ye-Semalt ikwiwebhusayithi yayo, kwaye ineetoni zemigca yebhlogi enxulumene namashishini akwi-Intanethi, izixhobo zokuthengisa kwi-Intanethi nakwezinye iindawo ezinxulumene noko. Ezi zithuba zebhlog zibhalwe ziingcali ebaleni, ezilungele ukwabelana ngolwazi lwazo, kwaye zinike ulwazi lwangaphakathi ngezihloko ezahlukeneyo ezinxulumeneNtengiso ye-SEO.
Ezinye zeeposti zebhlog oya kuzifumana kwi-Semalt Blog zibandakanya:
I-SEO kunye ne-PPC-Nguwuphi na oza kuyisebenzisa ukuze Ishushu Big?
Uyenza njani iKhasi leShishini likaGoogle kwaye uyi Brush?
Iindlela eziZelweyo-zezoNyaniso zokuNgenisa iiWebhusayithi zokuKhangela iiNjini | Semalt
Zona zixhobo ze-SEO eziSimahla ezingama-18 zokuphucula iZinga lakho | Semalt
Yintoni eyenza iProfayili yoLinganiso oluLinganiselweyo lwasemva?
Oku okuninzi ngakumbi kufikeleleka ngokulula kwiwebhusayithi. Ukufunda ezi zithuba kunokukunika ulwazi olunzulu kunye neendlela ezininzi zokukhulisa ishishini lakho.
Unokufumana nokubonana simahla kwe-SEO kwiwebhusayithi yeSemalt. Ukubonisana kusekwe ukunceda abo basebenza ixesha lokuqala, kunye nabathengi bakudala ukuba zichonge imiba yabo ye-SEO yemiba kunye nokukhulisa ukusebenza kweshishini labo.
Ngayo, abathengi banokuba nombono ongcono wento abayifunayo, kunye nohlobo lwenkonzo ekufuneka beyithengile kuSemalt.
Bonke abanini bamashishini kwi-intanethi, ii-freelancers, ii-webmasters kunye nabanye abantu kwihlabathi liphela bajonga izisombululo malunga nendlela yokukhulisa iwebhusayithi, i-Semalt yindlela yokuhamba. Banikezela ngewebhusayithi ezenziwe kakuhle kunye nokusebenza kwazo, ngokusebenzisa izixhobo ezahlukeneyo zentengiso ukukhuthaza ukubonakala nokuzibandakanya. I-Semalt yi-arhente yentengiso egcweleyo enabathengi bayo njengeyona nto iphambili, enempumelelo engathethekiyo kwaye iphumelele ukubonisa oko.